(tonga teto avy amin'ny Finday marani-tsaina)
Ny smartphone na koa finday marani-tsaina dia finday manana ny fahafahan'ny mpanampy dijitaly an'ny tena, fakan-tsary dijitaly ary solosaina finday. Atao amin'ny alalan'ny efijery kasihina ny fampidirana ny fampahalalana. Araka ny fomba fandehan'ny solosaina, ny finday marani-tsaina dia mandefa mpandirndra milina natokana ho an'ny finday ary mandefa fandaharna toa ny solosaina: mpandaha-potoana, fahitalavitra, fitetezan-tranonkala, famakiana ary fandefasana mailaka, fandefasana hafatra an-tsary na an-tsoratra, sns.
Satria solosaina kely ireo finday marani-tsaina, mampiasa mpandrindra milina iombonan'ny fitaovana izy ireo ho an'ny fifanentanana. Ny ankamaroan'ny finday marani-tsaina dia mampiasa an'i Apple iOS na Google Android, ary misy ihany koa ireo mampiasa an'i Windows Phone na ny BlackBerry OS.
Mandefa fandaharana mahery ny tokana ireo finday marani-tsaina amin'izao fotoana izao izay manampy ny mpampipasa azy hanao zavatra amin'ny fomba haingana ary mora kokoa. Afaka mahazo fandaharana be kokoa avy amin'ny kianjam-pivarotam-pandaharana (app store) ny mpampiasa toa ny Apple App Stor na ny Google Play izay manampy azy ireo hamita asa manokana.
Nihahaingana ny fifandraisana amin'ny data. Afaka mandray ary mandefa data haingana kokoa noho ireo finday taloha ny finday marani-tsaina. Mampiasa fenitra samihafa ho an'ny taham-pampitàn-data ny indostria. Natolotra tamin'ny 1991 ny 2G izay afaka mampita data amin'ny taha 56 kbit/s (kilobit isa-tsegondra).
Natolotra tamin'ny 2002 ny 3G. Ny hafaingam-pampitan-datan'ny finday manana 3G dia manomboka amin'ny 200 kbps atramin'ny 14 Mbps (megabit isa-tsegondra). Afaka mampiasa ny Aterineto ary ireo servisy mila taham-pampitana ambony toa ny streaming ny finday. Ny 4G izay afaka manana ny taha 100 Mbps hatramin'ny 1 Gbps dia manana hafaingana saika hitovy amin'ny fampitana amin'ny alalan'ny kofehy mampita hazavana.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Smartphone&oldid=767539"
Dernière modification le 20 Martsa 2015, à 08:20
Voaova farany tamin'ny 20 Martsa 2015 amin'ny 08:20 ity pejy ity.